3D Sex ဂိမ္းေတြေခတ္စားလာပါၿပီ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့က်ေနာ္တို႔ကမွန္းလို႔မရဘူး။ ဒီတစ်ခါလည်းကသူတို့ရဲ့အသားအရေသေံင်,ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ရပ်များကာတွန်းဖြစ်ကြောင်းလမ်းဖွင့်,ဒါမှမဟုတ်ပါကလုံးဝအခြားအရာတစ်ခုခုရဲ့. ပင်အရေးမထားဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ဒီဂိမ္းေတြဟာလူေတြအမ်ားအားျဖင့္ကစားတဲ့ 2D ဂိမ္းေတြနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ပုိၿပီးလက္ေတြ႔က်တဲ့အေတြ႔အႀကံဳရွိတယ္လုိ႔ ဆုိရမွာပါ။
Boobs ပုံကြီးချဲ့နိုင်ပါတယ်,သူတို့နေဆဲချစ်စရာကောင်းတဲ့ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်။ Pussy အံ့သြဖွယ်ကြည့်,မြည်းကိုကြီးမားခြင်းနှင့်ကြီးမားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း,သူတို့အဖြစ်ကောင်းစွာအရည်ရွှမ်းကြည့်ရှုပါ။ ထိုယောက်ျားတွေအကြောင်း,သူတို့ရဲ့ dick အမြဲကောင်းတဲ့ကြည့်ရှု,နှင့်နေပါစေသူတို့ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့,သူတို့ fit။ အဲဒီ 3D ဂိမ်းတွေကပဲလူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာသင့်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဂိမ်းကောင်းလေးတစ်ခုရှိနေလို့သင့်ကိုချစ်တော့မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းထဲမှာသင်ကသင့်ရဲ့ကျားမကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်,ပြီးတော့သင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်,ပြီးနောက်,သင်မေးခွန်းများကို၏စုံတွဲတစ်တွဲဖြေဆိုရန်လိုအပ်,ဒါပေမယ့်ထို့နောက်သင်ပြုသောအမှုဖွင့်. သငျသညျကစားရန်အခမဲ့ပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်,သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်,နှင့်သင်ပိုမိုလူ fuck ဆိုတဲ့ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်,မဟုတ်ကြောင်းလူတစ်ဦး. ဤသည်သူတို့သည်သင်၏preferences ကိုဖြစ်ကြသည်အဘယ်အရာကိုမြင်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတခြား 3D ဂိမ်းတွေနဲ့မတူဘဲဒီတစ်ခေါက်မှာ multiplayer option ပါပါတယ်။ သငျသညျ blowjobs,မိန်းမအင်္ဂါလိင်,စအိုလိင်ကဲ့သို့အမျိုးမျိုးသောလိင်လုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး,သင့်ဦးနှောက်စိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်အခြားအရာအားလုံးကို။
မျိုးစုံလူတို့နှင့်အတူဆော့ကစားလိုပါသလား? အဘယ်သူမျှမပြဿနာပင်ပိုကောင်း။ သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာအခြားမိန်းကလေးတစ်ဦး fucking နေစဉ်,သင်သည်သင်၏အခွံမာသီးအပေါ်နို့စို့မိန်းကလေးတစ်ဦးရှိသည်နိုင်အောင်နှစ်ခုဂိမ်းကစားမိတ်ဖက်ကိုရှာပါ။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ဒီအိပ်မက်ဟာရုတ်တရက်လက်တွေ့ဖြစ်လာတဲ့အိပ်မက်တစ်ခုလိုပါပဲ။ သင်ဤဂိမ်းကစားပြီးတာနဲ့,သင်အသက်အဘို့မှတ်သားပါလိမ့်မယ်။ အွန်လိုင်းအံ့သြဖွယ်လိင်ရှိခြင်း၏မရေမတွက်နိုင်သောနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောနာရီ,အဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း။ သူမ၏boob အရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲချင်ပါသလား။ ပြု. သူမ၏အရည်ရွှမ်းသော asshole နှင့်မြည်းပါးကိုပင်ပိုကြီးစေလိုပါသလား။ သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာကြောင်းလုပျနိုငျပါသညျ။, ဒီနေရာမှာကန့်သတ်ချက်မရှိဘူး၊မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ပါယာရဲ့ဧကရာဇ်ဖြစ်လာဖို့အခမဲ့ပါ။
ဒီအကြောင်းနောက်ထပ်အကြီးအရာသင်သည်လည်းအမျိုးမျိုးသော setting များကိုရှေးခယျြနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကိုယ့္အိမ္နီးခ်င္းကို fuck လုပ္ခ်င္ရင္လုပ္လို႔ရတယ္။ သင်သည်သင်၏လူကြီးတွေဟာအဲဒီမှာရှိတယ်ဇနီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်,တစ်ခုခုပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး. သင်တို့သည်လည်းအမျိုးမျိုးသောကျော်ကြားကာတွန်းဇာတ်ကောင် fuck ဆိုတဲ့ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်,သင်တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ထဲကကောင်းတစ်ဦးငွေပမာဏနှင့်အတူပျော်စရာရှိနိုင်ပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့်၊အရေးမပါဘူး၊သင်ရွေးချယ်သမျှကိုသင်လုပ်နိုင်သည်။ ပင်သင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဝမ်းကွဲရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး! အခြားအ 3D ဂိမ်းများနှင့်မတူဘဲ,ဒီတစ်ခုလုံးဝသုညကန့်သတ်ရှိပါတယ်,သင်၏အတွင်းပိုင်းရှိသည်သောရိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိရစ္ဆာန်တိုက်ဖျက်မည်မှအခမဲ့ပါပဲ။
သင့်ဇနီးသို့မဟုတ်ရည်းစားက suffocate ဖို့ကြိုးစားနေလျှင်ပင်။ ငါကဘယ်လိုသိ,ကိုယ့်သင်သည်သင်၏စစ်မှန်သောရည်ရွယ်ချက်ရှာတွေ့ချင်နှင့်မည်သူမည်ဝါ fuck ဆိုတဲ့ချင်နှင့်သို့သော်သင်ချင်တယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ငါဒီဂိမ်းကိုဖြတ်ပြီးလာသည်အထိငါလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့လို့ရိုးရိုးလေး။ ကဲ..ကဲ..ဗဟုသုတတွေကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။ နှင့်လည်းဒီဂိမ်းကစားဘို့မိမိတို့အခြေအနေများ။ ဟုတ်ပါတယ်,သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာအခြား 3D ဂိမ်းများနှင့်အတူအုပ်ချုပ်မှုဖြစ်သည့်တဆယ်ရှစ်နှစ်ဖြစ်ရန်ရှိသည်။
ပြီးနောက်,သူတို့ကသငျသညျအမြိုးသမီးမြားကျော်လွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူအဆင်ပြေဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း,သင်အဖြစ်ကောင်းစွာအစွန်းရောက်လိင်နှင့်အတူအဆင်ပြေပါတယ်ရှိမရှိမေးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်၊ဒီစာဖတ်နေရင်၊မင်းဟာငါ့ယောက်ျားဆိုတာငါသိတယ်၊ဒါကမင်းကိုတောင်အဆင့်မသတ်မှတ်ဘူး။ သူတို့ကအစသင်ဤဂိမ်းကစားခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာတွေသို့မဟုတ်ရောဂါသို့မဟုတ်သိမ်းယူမှုရှိမရှိမေးကြည့်ပါ။ အဲဒီေမးခြန္းေတြအားလံုးကိုရွင္းၿပီးရင္ေတာ့ sign up လုပ္လို႔ရပါၿပီ။ တစ္ခုရွိတာကသူတို႔ကကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္၊ကိုယ့္ ZIP codeေတြအတြက္ေတာင္းေနတာပါ။ စိတ်မပူပါနဲ့။ သူတို႔ကတျခားသူေတြနဲ႔ေဝးေဝးေနဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။, ဒါကသူတို့စုဆောင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းရုံအချို့သောပုဂ္ဂလိကဒေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းဖြစ်ကောင်းအချို့ငွေပေးချေမှုရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ကြောင့်,ကိုယ့်အမှု၌,သငျသညျအခြို့သောအထူးအမှုအရာချင်တယ်ဆိုရင်,သို့မဟုတ်ပဲယေဘုယျအားဖြင့်အချို့သောအခွင့်အရေးနှင့်အထူးကုသမှု.
ဒါကသူတို့အဖြစ်ကောင်းစွာကောင်းသောလိင်အရေးယူရှိသည်အထူးသဖြင့်လျှင်,အမှန်တကယ်တစ်ခုခုတန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြောင်းအားလုံး 3D လိင်ဂိမ်းအလုပ်လုပ်ပုံပါပဲ။ ဆိုလိုတာကဂိမ္းေကာင္းေကာင္းကစားၿပီးၿပီဆိုရင္ေကာင္းေကာင္းလမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ၿပီ၊အေကာင္းဆံုးအရာေတြကိုရွာေဖြႏိုင္ၿပီလို႔ ဆိုလိုတာပါ။ ဒါကြောင့်အချို့ငွေပေးချေမှုလိုအပ်တယ်လျှင်ပင်,မှန်သော? ကျွန်တော့်ပရိသတ်တွေအတွက်သာအကောင်းဆုံးပါ။ ဒီသင်တို့ဆီသို့စိတ်ဝင်စားဖို့အသံလျှင်,သင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာချက်ချင်းဒီဂိမ်းကိုကစားစေခြင်းငှါ,.
ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်ကအထူးအရည်အသွေးတွေမရှိလို့ပါပဲ။ သငျသညျကစားရန်စတင်မီကပင်,သင်ဂိမ်းယေဘုယျအားဖြင့်တူသောအရာကိုမြင်နိုင်ပါသည်။ သငျသညျသူတို့ကွဲပြားခြားနားသောလိင် animate ဘယ်လိုမြင်နိုင်ပါသည်,သင်ဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်မိန်းကလေးငယ်များ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်,နှင့်သင်တန်း၏,သင်ချက်ချင်း fuck ဆိုတဲ့တူအဘယ်အရာကိုမြင်နိုင်ပါသည်။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့က်ေနာ္တို႔အားလံုးဒီကေန႔မွာစုေပါင္းၿပီးေတာ့ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေျပာလို႔ရပါတယ္။ အကယ်၍သင်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဂိမ်းများပေါ်တွင်သင်၏အချိန်ကိုဖြုန်းတီးရန်စိတ်မ ၀ င်စားပါက၊သင်သည်ဤဂိမ်းသည်အလွန်အမင်းတွန်းလှန်ကြောင်းသင်တွေ့ရလိမ့်မည်၊၎င်းသည်အလွန်အမင်းစွဲလမ်းစေသည့်အချက်နီးပါးဖြစ်သည်။, အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔3D ဂိမ္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသတိထားဖို႔ အားလံုးကိုအႀကံေပးခ်င္တာကေတာ့ fuck ဆိုတဲ့လြယ္ကူတဲ့အရာမဟုတ္ဘူးဆိုတာပါပဲ။
သငျသညျပြီးသားဒီဂိမ်းကစားရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်,သင်သို့ရတဲ့အရာကိုသိ,သင့်ရဲ့ငပဲနှိပ်စက်တာကြောင့်နောက်ပိုင်းတွင်ငိုငါ့ထံသို့မလာကြဘူး။ ငါခံစားချက်ကိုသိ! သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာပဲလွယ်ကူယူစေခြင်းငှါ,,နှင့်ဤသို့ subtly ငုပ်,ဒီအစဉ်အမြဲသင်၏အသက်တာပြောင်းလဲသွားမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်. ၂၁ ရာစုမွာေနလို႔ေကာင္းတယ္၊ဒီေလာက္ႀကီးက်ယ္တဲ့အရာေတြရွိတဲ့ေနရာမွာလည္းေနလို႔ေကာင္းတယ္။ သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာစောဒကတက်ရပ်တန့်စေခြင်းငှါ,,နှင့်သင်ဖြစ်ကောင်းကြောင့်နောက်ပိုင်းတွင်ငါ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပျော်မွေ့.
ဆင်တူပိုဆိုဒ်များ 3D Sex Games